ဟန်းဂုရွာ: လောင်ကျွမ်းရင်း .. ပျံသန်းနေရသူများ !!
လောင်ကျွမ်းရင်း .. ပျံသန်းနေရသူများ !!
ဘယ်လိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက် ဖလော်ဆော်ဖာ (ဂေါက်တောက်တောက်) ပုံ ပေါက်နေတဲ့ အသိ ညီငယ်လေး တစ်ယောက် ခုတလော အရက်တွေ ရက်ခြားရက်ခြား သောက်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းကြောင့် အရင်က အရက်ကို လုံးဝမသောက်တတ်တဲ့ သူ့အတွက် အဲဒီ အရက်ဆိုတာကြီးကို စွဲလန်းမသွားခင် ကြိုတင်တားမြစ်မှ သင့်မယ်ဆိုတဲ့ စေတနာစိတ်နဲ့ မနေ့ညနေက သူ့ကို ဆာဆန်းမှာ ခေါ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျနော်က သူ့ကို “ညီလေး နဲ့ ပြောစရာ စကားနဲနဲရှိလို့ အကိုတို့တွေ ကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ရင်း စကားပြောကြရအောင်” လို့ ဆိုတော့ သူက .. “အကိုကလည်းဗျာ ညနေစောင်းကြီး ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ကော်ဖီသောက်မှာလဲ .. ဆိုဂျုးလေး တစ်ခွက်လောက် ချရင်း ပြောကြတာပေါ့ ” ဆိုပြီး အမဲအူမကြီးကင်ဆိုင်ထဲ ဝင်သွားတော့ .. ကျနော်လည်း “အင်း .. ကော်ဖီဆိုင်ထဲ ပြောလည်း ဒီစကား .. အရက်ဆိုင်ထဲ ပြောလည်း ဒီစကားပါပဲလေ .. ငါ့စေတနာသာ အရောင် မပြောင်းရင် ငါ့စကားရဲ့ အနက်ဟာလည်း အဓိပ္ပါယ်ပြောင်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး ” လို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရင်း နောက်ကနေ လိုက်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဆိုင်ထဲရောက်တော့ ညီငယ်လေးက အမဲအူစုံကင်နဲ့ အရက်တစ်လုံး မှာလိုက်ပါတယ် ။ ခဏနေတော့ သူမှာထားတဲ့ အူစုံကင် ၊ အရက်နဲ့အတူ အရက်ခွက် နှစ်ခွက် လာချပေးတယ် ။ ညီငယ်လေးက ဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်နဲ့ လူငယ်ပီပီ ဇိုးကနဲ ဇတ်ကနဲဆို အရက်ပုလင်းကို ကောက်ဖွင့် ၊ ဂွပ်ကနဲ ဂွပ်ကနဲ ခွက်တွေထဲ ကောက်ထည့်လိုက်ပြီး အရက်ခွက် တစ်ခုကိုလည်း ကျနော့် အရှေ့ဖက် ဖတ်ကနဲ့ဆို တွန်းပို့ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ကျနော်ဟာ ဟိုတစ်ချိန်တုန်းကတော့ အရက်နဲ့ ယဉ်ပါးခဲ့ဖူးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ အရက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုသိ ပိုနားလည်လာရလို့ အရက်ကို လုံးဝ မသောက်တော့ဖို့ အားထုတ်နေသူ တစ်ယောက်ပါ ။ ဒါကြောင့် ညီငယ်လေး တွန်းပို့ပေးလာတဲ့ အရက်ခွက်ကို ကျနော့် အရှေ့ကနေ ဘေးဖက်ကို အသာလေး လက်နဲ့တွန်းပြီး ဖယ်လိုက်ရင်း အဲဒီ ညီငယ်လေးရဲ့ မျက်လုံးတွေထဲကို တည့်တည့် စိုက်ကြည့်ကာ ပြတ်သားတိကျတဲ့ လေသံနဲ့ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလိုက်ပါတယ် .. ။
“ညီလေး .. ဘာဖြစ်လို့ အရက်ကို သောက်တာလဲ” ..
ကျနော့် မေးခွန်းဆုံးတော့ ညီငယ်လေးက သူ့ရှေ့က အရက်ခွက်ကို လက်နဲ့ကောက်ကိုင်ကာ ဂွမ်ကနဲ မော့ချလိုက်ပြီး “ကျွဲ မခိုးထားလို့ပေါ့ အကိုရာ ၊ ကျွဲသာ ခိုးထားရင် အရက်မူးပြီး ကျွဲခိုးပေါ်မှာစိုးလို့ အရက်ကို ကျနော် ဘယ်သောက် ရဲပါ့မလဲ” လို့ အဖြေပေးရင်း အမဲအူမကြီးကင် တစ်ဖတ်ကိုလည်း တူနဲ့ကောက်ညှပ်ကာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ ကျွိစိကျွိစိနဲ့ ဝါးနေပါတော့တယ် ။ ကျနော့်မှာသာ ရုတ်တရက် ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ညီငယ်လေးရဲ့ အဖြေကြောင့် ရှေ့ဆက် ဘာပြောရမှန်းမသိ ဘဲငန်းအိုကြီး လည်ပင်းလှည်းနင်းခံရသလို ဖြစ်သွားရပါတော့တယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ညီငယ်လေးက ကျနော့်ကို .. “အကိုကရော ဘာဖြစ်လို့ အရက်ကို မသောက်တော့တာတုန်း .. ဘာလဲ ကျွဲတွေ ခိုးထားလို့လား ..” လို့ ကျနော်ထင်မထားတဲ့ မေးခွန်းကို ရုတ်တရက် ကောက်မေးလိုက်လို့ .. “ ဟာ .. မဟုတ်ဘူး ညီလေး .. မခိုးပါဘူး .. မသောက်ပါဘူး .. အဲ မသောက်တာ ခိုးထားလို့ မဟုတ်ပါဘူး .. သောက်ပါတယ် .. အကို ကျွဲခိုးပေါ်မှာ မကြောက်ပါဘူး .. အဲ .. မဟုတ်ပါဘူး .. ကျွဲမခိုးထားလို့ အရက်သောက်ရမှာ မကြောက်ပါဘူး ညီရ .. သောက်ရဲပါတယ် ညီရ” ဆိုပြီး အယောင်ယောင် အမှားမှား အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့နဲ့ ဘေးဖက်နားရောက်နေတဲ့ အရက်ခွက်ကို စွပ်ကနဲ ကောက်ကိုင်ရင်း ဂွပ်ကနဲ မော့ချလိုက်မိပါတော့တယ် ။ အား .. မသောက်ရတာ ကြာတော့ ကောင်းလိုက်တာဗျာ .. အဲဒီနောက်တော့ အကိုသောက် ၊ ညီလေးသောက်နဲ့ အရက်လည်း ထပ်မှာ အမဲအူမကြီးကင် လည်း ထပ်မှာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတော့တယ် ။ နောက်တော့ ကျနော်ဟောမယ့် တရားဟာလည်း လမ်းကြောင်းတွေ ပြောင်းကုန်ရပါတော့တယ် ။
ဒီမယ် .. ညီလေးရ .. အကိုလည်း အရက်သောက်တာ မကောင်းမှန်း သိတယ် နားလည်တယ် ၊ အရူးမဟုတ်ဘူး .. စိတ်ညစ်လို့ ပင်ပန်းလို့ ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ သောက်တာ ၊ တစ်ခြားနည်းလမ်းလဲ မရှာနိုင်သေးလို့ သောက်နေတာ ။ တစ်ကယ်လို့ ပင်ပင်ပန်းပန်း မဟုတ်ပဲ သက်တောင့်သက်သာ အလုပ်လုပ်ရမယ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုလည်း ဘာမှ မရှိတဲ့ အနေအထားဆို အကိုက ဘာ ဒီအရက်ကို သောက်နေအုံးတော့မလဲ .. အဲလောက်တော့ လူတွေ နားလည်ဖို့ သင့်ပါတယ်ကွာ ။ တကယ် စေတနာရှိလို့ ပြုပြင်ပေးချင်ရင်လည်း ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာနာ စိတ်ကလေးနဲ့ နားလည်လက်ခံနိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းကနေ ပြောဆို ဖြောင်းဖျပြုပြင်ယူပေါ့ ။ အခုတော့ လူတွေကကွာ အရက်သောက်တဲ့ ငါတို့ကိုပဲ ရွေးပြီး ဝေဖန်ကြ၊ အပြစ်တင်ကြ၊ ရှုံ့ချကြ ၊ မတူသလို မတန်သလို အဖက်မလုပ်ကြတာ ကိုတော့ တရားမမျှတဘူး ၊ မတရားဘူးလို့ ထင်တယ်ကွာ .. ဒါ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တာပဲကွ ။ လောကကြီးမှာ တစ်ကယ်တော့ အရက်သမား အပြင်ကို မကောင်းတဲ့ကောင်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ညီလေးရာ .. တို့ကို အလုပ်ခိုင်းပြီး ပိုက်ဆံ မပေးတဲ့ အလုပ်ရှင်တွေ .. ထိခိုက်မှုဖြစ်ရင် ဆေးကုမပေး လျှော်ကြေးမပေးတဲ့ သူဌေးတွေ .. ကျွန်လိုပဲ ပိုင်ရှင်က ဘာလုပ်လုပ် သည်းခံနေ .. သည်းမခံနိုင်လို့ အလုပ်က ထွက်ပြေးရင် သိန်း ၃၀လျှော်ရမယ်လို့ ဥပဒေပြဌါန်းတဲ့ အစိုးရတွေ .. လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတွေဖြစ်အောင် လိုက်ဖွနေတဲ့ အကောင်တွေ .. တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံကို စစ်မက်ဖြစ်ပွားအောင် သွေးထိုးနေတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေ .. အချိန်မရွေး လောကကြီးကို ပြာကျသွားစေနိုင်တဲ့ အန္တရာယ် ကြီးမားလွန်းလှတဲ့ အနူမြူဗုံးတွေ ထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အင်အား ကောင်းအောင် ပျိုးထောင်နေသူတွေ .. ဒီလို ကောင်တွေကိုကျတော့ ဘာမှ မပြောပဲနဲ့ ဒီအရက်ကလေး ၂လုံးလောက် သောက်တဲ့ ငါတို့ကိုပဲ လာလာပြီး ထိခိုက်နေတာ တော်တော်ဆိုးတယ်ကွာ .. ကဲ .. ချ .. ညီလေးရာ ချ .. အမဲအူလေး လဲ စားအုံး .. ။
မှတ်ချက် ( ဤစာစုများသည် အရက်သောက်ခြင်းကို အားပေးအားမြှောက် ပြုရာ ရောက်သည်ဟု့ သဘော ပိုက်ကြသူများ ရှိနိုင်သလို .. လောကလူ့ရွာ လူသားများအပေါ် ယခုထက် ပိုမို နားလည်လာကာ (နွားနို့သောက်ခိုင်းခြင်းထက်) ၄င်းတို့ အတွက် မှန်ကန်သင့်မြတ်သည့် အနာဂါတ်များ ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးနိုင် ရေး အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည်ဟု့ မှတ်ယူသူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည် ။ )